android ဖုန်းများအတွက် antivirus စနစ် APK ကို | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » လုံခြုံရေး & သီးသန့်လုံခြုံရေး Apps ကပ » antivirus စနစ်
antivirus စနစ် APK ကို
antivirus System ကိုလုံခြုံသင့်ရဲ့ဖုန်းကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ဒီဇိုင်းခဲ့!
Download များနှင့် install ဒီ antivirus ကို tool ကို, ပြီးတော့ပဲအားလုံးသင့်ရဲ့ device ကို features တွေဖြေလျော့နှင့်ပျော်မွေ့!
ကျနော်တို့အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်မှု, malware များ, trojans နဲ့သံသယဖြစ်ဖွယ်ဖိုင်တွေနဲ့တူ, သင်က Android OS ကိုပစ်မှတ်ထားကြောင်းခြိမ်းခြောက်မှုများဆန့်ကျင်အကောင်းဆုံးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကိုဆက်ကပ်။
ဒီအကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး tool ကိုအတော်လေးပေါ့ပါးဖြစ်ပါတယ်။ ယာဉ်အသွားအလာနှင့်၎င်း၏ဗိုင်းရပ်စ်ဒေတာအခြေစိုက်စခန်းအဆက်မပြတ်မွမ်းမံဝန်မထားဘူး။
ပဲစက္ကန့်အနည်းငယ်ကင်နာနှင့်အတူ, သင်သည်သင်၏ device ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်အပေါင်းတို့နှင့်တကွသင်၏ကိုယ်ပိုင်ဒေတာကိုစောင့်ရှောက်ပါလိမ့်မယ်!
၎င်း၏အားနည်းချက်များနှင့်ခြိမ်းခြောက်မှုများမှကာကွယ်, ဘယ်တော့မှအရင်ကဲ့သို့, ဝဘ် browse ဖို့ယုံကြည်မှုခံစားရ! ကျွန်ုပ်တို့၏ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးနှင့် malware detection စနစ်အင်ဂျင်ကိုလည်းတိုင်းအသစ်က installed app ကိုအလိုအလျှောက်စစ်ဆေးအတည်ပြုကြလိမ့်မည်, တစ်ဦးကိုမှန်ကန်အချိန် app ကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးဖို့လည်းပါဝင်သည်, ဒါ။
ဒီ app ကသင့် device ကိုလုံခြုံရေးနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်ပိုမိုကောင်းမွန်စေကူညီပေးနေ, ဗိုင်းရပ်စ် tracker နှင့်သန့်စင်အဖြစ်ပြုမူပါလိမ့်မယ်။
အံ့သြ Antivirus ကိုစနစ်တပ်ဆင်ထား:
- အပြီးအစီးလုံခြုံရေးနှင့်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး - ခိုင်မာတဲ့ဗိုင်းရပ်နှင့် malware detection စနစ်
- အနိမျ့အရင်းအမြစ်အသုံးပြုမှု - သင့်စက်ကိုကာကွယ်ခြင်းကအရေးကြီးတယ်, ဒါပေမယ့်အဖြစ်အနည်းငယ်သာသယံဇာတနှင့်မှတ်ဉာဏ်ကိုသုံးနေစဉ်ကလုပ်နေတာတောင်မှ သာ. ကောင်း၏
- Fantastic user interface ကို - အလွန်အသုံးပြုသူဖော်ရွေ
- Antivirus ကိုဒေတာဘေ့စမှန်မှန် updated
- လက်ရှိအချိန်လုံခြုံရေးကင်နာ - သစ်ကို installed apps များ scan
- System ကိုသန့်စင်
- မည်သည့် Android device ကိုများအတွက်သင့်တော်
- 30 ရက်ပေါင်းအခမဲ့စမ်းသပ်
- က Upgrade နှင့်အပိုဆောင်း features တွေရကြော်ငြာတွေကိုဖယ်ရှားခြင်းနှင့်အပြည့်အဝကာကွယ်ထားသည်ကိုစောင့်ရှောက်
အန်းဒရွိုက်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ Antivirus ကို System ကိုယခုအစဉ်အဆက်ထက်ပိုပြီးထိရောက်နှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောပါ!
Google ပေါ်တွင်အတွက် Get Play နဲ့နောက်ဆုံးတော့လုံခြုံခံစား!
အစဉ်အဆက်ထက် ပို. ယုံကြည်စိတ်ချရသော:
- Enhanced ခြိမ်းခြောက်မှုထောက်လှမ်းခြင်း
- ပိုချွေ Antivirus ကိုအင်ဂျင်
- တိုးတက်လာသော Malware နဲ့ထောက်လှမ်းခြင်း
23.79 ကို MB
Brainiacs Apps ကပ
ကြှနျုပျ၏ Android Antivirus ကို